The Breadwinner (2017) | MM Movie Store
Breadwinner ဇာတျကားလေးဟာ ၂၀၁၇ခုနှဈထှကျ ကာတှနျးကားလေးဖွဈပါတယျImdb rating 7.6/10…..rotten tomatoes 94% ထိရရှိထားတဲ့ အကွိမျ ၉၀မွောကျအကယျဒမီ ဇကာတငျကားလေးဖွဈပါတယျ
စာရေးဆရာDeborah Ellisရဲ့အရောငျးရဆုံးဝတ်ထုကိုအခွခေံရိုကျကူးထားပွီး နာမညျကွီးမငျးသမီးဂြိုလီကိုယျတိုငျထုတျလုပျရေးမှာပါဝငျခဲ့ပါတယျဇာတျလမျးအကဉျြးကတော့…..ဇာတျလမျးနာမညျလေးဖွဈတဲ့ breadwinner ဆိုတဲ့အဓိပ်ပါယျက မိသားစုအတှကျရုနျးကနျထောကျပံ့ပေးသူ ကိုဆိုလိုတာပါ
တာလီဘနျတှအေုပျစိုးနတေဲ့ကာဘူးလျမွို့မှာ ပါဗာနာဆိုတဲ့ကောငျမလေးတဈယောကျရှိတယျသူမဟာ ငယျရှယျလှပသူဖွဈပမေယျ့ တာလီဘနျကွီးစိုးတဲ့နရောမှာ နရေတဲ့အပွငျ ခွတေဖကျပွတျဖခငျနဲ့မိခငျအိုကွီးကိုလုပျကြှေးနရေလတေော့ နစေ့ဉျနဲ့အမြှခကျခဲပငျပနျးနရေရှာတယျ.
ဒါ့အပွငျ သူမမှာ လူမမယျမောငျလေးတဈယောကျလညျးရှိသေးတယျ..ဘယျလိုပဲပငျပနျးပါစေ သူမဟာ မိသားစုအတှကျရုနျးကနျနရေတာကိုပြျောရှငျနပေါတယျတဈနမှေ့ာတော့ အစှနျးရောကျတဈခြို့ဟာ သူမရဲ့ဖခငျကွီးကို မှားယှငျးစှပျစှဲခဲ့ပါတယျ..
သူမဟာ ဖခငျရဲ့အခကျအခဲတှဖွေရှေငျးဖို့ကွိုးစားနတေုနျးမှာပဲအစှနျးရောကျတှကေ စညျးကမျးခကျြအသဈထုတျလိုကျပါတယျ..အဲ့ဒါကတော့ ယောင်ျကြားလေးအုပျထိနျးသူမပါပဲ အမြိုးသမီးတှအေပွငျမထှကျရဆိုတဲ့ အမိနျ့ပါပဲ..
ကိုငျးပရိတျသတျကွီးရေ ပါဗာနာဆိုတဲ့ကောငျမလေးတဈယောကျ ဖခငျကွီးရဲ့အခကျအခဲတှကေိုဘယျလိုကူညီရငျဆိုငျဖွရှေငျးမလဲ..အုပျထိနျးသူယောင်ျကြားလေးမပါအမြိုးသမီးမြားအပွငျမထှကျရအမိနျ့ကိုလကျတဈလုံးခွားဘယျလိုရငျဆိုမလဲ.စတာတှကေို ကွညျ့ရှုခံစားကွညျ့လိုကျပါဦး
Breadwinner ဇာတ်ကားလေးဟာ ၂၀၁၇ခုနှစ်ထွက် ကာတွန်းကားလေးဖြစ်ပါတယ်Imdb rating 7.6/10…..rotten tomatoes 94% ထိရရှိထားတဲ့ အကြိမ် ၉၀မြောက်အကယ်ဒမီ ဇကာတင်ကားလေးဖြစ်ပါတယ်
စာရေးဆရာDeborah Ellisရဲ့အရောင်းရဆုံးဝတ္ထုကိုအခြေခံရိုက်ကူးထားပြီး နာမည်ကြီးမင်းသမီးဂျိုလီကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်ရေးမှာပါဝင်ခဲ့ပါတယ်ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့…..ဇာတ်လမ်းနာမည်လေးဖြစ်တဲ့ breadwinner ဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ်က မိသားစုအတွက်ရုန်းကန်ထောက်ပံ့ပေးသူ ကိုဆိုလိုတာပါ
တာလီဘန်တွေအုပ်စိုးနေတဲ့ကာဘူးလ်မြို့မှာ ပါဗာနာဆိုတဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက်ရှိတယ်သူမဟာ ငယ်ရွယ်လှပသူဖြစ်ပေမယ့် တာလီဘန်ကြီးစိုးတဲ့နေရာမှာ နေရတဲ့အပြင် ခြေတဖက်ပြတ်ဖခင်နဲ့မိခင်အိုကြီးကိုလုပ်ကျွေးနေရလေတော့ နေ့စဉ်နဲ့အမျှခက်ခဲပင်ပန်းနေရရှာတယ်.
ဒါ့အပြင် သူမမှာ လူမမယ်မောင်လေးတစ်ယောက်လည်းရှိသေးတယ်..ဘယ်လိုပဲပင်ပန်းပါစေ သူမဟာ မိသားစုအတွက်ရုန်းကန်နေရတာကိုပျော်ရွှင်နေပါတယ်တစ်နေ့မှာတော့ အစွန်းရောက်တစ်ချို့ဟာ သူမရဲ့ဖခင်ကြီးကို မှားယွင်းစွပ်စွဲခဲ့ပါတယ်..
သူမဟာ ဖခင်ရဲ့အခက်အခဲတွေဖြေရှင်းဖို့ကြိုးစားနေတုန်းမှာပဲအစွန်းရောက်တွေက စည်းကမ်းချက်အသစ်ထုတ်လိုက်ပါတယ်..အဲ့ဒါကတော့ ယောင်္ကျားလေးအုပ်ထိန်းသူမပါပဲ အမျိုးသမီးတွေအပြင်မထွက်ရဆိုတဲ့ အမိန့်ပါပဲ..
ကိုင်းပရိတ်သတ်ကြီးရေ ပါဗာနာဆိုတဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက် ဖခင်ကြီးရဲ့အခက်အခဲတွေကိုဘယ်လိုကူညီရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းမလဲ..အုပ်ထိန်းသူယောင်္ကျားလေးမပါအမျိုးသမီးများအပြင်မထွက်ရအမိန့်ကိုလက်တစ်လုံးခြားဘယ်လိုရင်ဆိုမလဲ.စတာတွေကို ကြည့်ရှုခံစားကြည့်လိုက်ပါဦး